ပတ်ဘိုဂွံ (ဟန်းဂု: 박보검; ၁၆ ဇွန် ၁၉၉၃ မွေး) သည် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်ပြီး Hello Monster(၂၀၁၅)၌ စိတ္တဇရှေ့နေအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Reply 1988 (၂၀၁၅)၌ ဉာဏ်ကြီးရှင် ဂိုကစားသမားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Love in the Moonlight (၂၀၁၆)၌ ဂျိုဆွန်အိမ်ရှေ့စံအဖြစ်လည်းကောင်း ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်၍ ချီးမွမ်းမှု ခံရသည်။
(1993-06-16) ဇွန် ၁၆၊ ၁၉၉၃ (အသက် ၂၆)
2014–2015: လူကြိုက်များလာခြင်းနှင့် ချီးကျူးခံရခြင်းပြင်ဆင်
၂၀၁၅ မေ၌ Red Velvet ၏ အိုင်းရင်းနှင့် ပူးတွဲ၍ Music Bank ၌ တင်ဆက်သူလုပ်ရာ၊ သူတို့၏ ဓာတုဗေဒစွမ်းရည်ကော၊ အဆိုနှင့် တက်ဆက်ပုံတို့၌ပါ ပရိသတ်အာရုံစိုက်မှု ရရှိသည်။  သတင်းစာက ရှိုးပွဲ၏ ၁၈ နှစ်သမိုင်းအတွင်း အလိုက်ဖက်ဆုံး ပါတနာများထဲမှ တစုံတွဲဟု ခေါ်ဝေါ်ပြီး၊ ပတ်သည် ကေဘီအက်စ်ဖျော်ဖြေရေးဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံးလူသစ်ဆုကို ရရှိသည်။ 
2016–present: Mainstream successပြင်ဆင်
January 16, 2016 ဆိုးလ်
Our Exciting First Meeting KBS Arena 
December 10, 2016 ကွာလာလမ်ပူ
December 17, 2016 ဟောင်ကောင်
January 13, 2017 ဂျာကာတာ
January 22, 2017 ထိုင်ပေ
February 4, 2017 တိုကျို
February 11, 2017 ဗန်ကောက်
February 18, 2017 စင်္ကာပူ
↑ Park Bo-gum: "명지대 14학번, 동기·선배들 연기력에 스스로 반성"။
↑ '식사' 배종옥 "박보검, 촬영 들어가기도 전에 눈물…막 울더라"။
↑ [무비:스포이트 김성훈 감독 "'끝까지 간다' 속 박보검, 무언가 있구나 느꼈죠"]။
↑ ‘Love in the Moonlight’ ranks first among Korean dramas။
↑ Don’t know Park Bo-gum? Well, you should။
↑ 박보검, '2016 아시아 투어 팬미팅' 개최။
↑ 스텔라장, 박보검·김연아 로맨틱 광고송 주인공။
↑ InStyle Icons:Next Generation။
↑ Male Rookie Actor Nomination။
↑ Winners of 3rd Melodi Awards။
↑ Yahoo! Asia Buzz Awards။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပတ်ဘိုဂွံ&oldid=477969" မှ ရယူရန်
၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၂၂:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။